.: zeroAltered Photo World :.
:-: Unable Official Title :-:
tag : K , Ko Phyo , Others
Koko Chit Oo Mg
tag : K , Koko Chit Oo Mg , People
Let's play chessboard
tag : J , James Johnson , Others
Cupid or flying man
ဒုတိယ.... L E လေးပါ...
tag : K , Koko Chit Oo Mg , Long
tag : flower , K , Ko Phyo
tag : K , Ko Phyo , Long
:4: Unable Official Title :4:
Loi Nam Khone
tag : L , Loi Nam Khone , Others
Fast & furious9အတွက်!!!!
၁ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတဲ့ ကြာဖူးလေးပါ
tag : B&W , J , James Johnson
အခြေအနေ ကောင်းဝူး . . . ပြောင်းဖူးပဲ ချားတော့မယ်.....
tag : Animals , K , Koko Chit Oo Mg
tag : flower , M , Maung Ko
Bang kra thum ရွာမှ ဧရာမကျွန်းဇရပ်ကြီး
tag : N , Naga Saena , Others
.: zeroAltered Photo World :. ›
ရည်ရွယ်ချက် နှင့် သတ်မှတ်ချက်
“ zeroAltered Photo World ”
ဝါသနာရှင်များ၏ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ Group သည် ဓါတ်ပုံပညာအား ဝါသနာပါသော ကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးသော(ညီအစ်ကိုကဲ့သို့ခင်မင်သော) သူငယ်ချင်းများ စုစည်း၍ စဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။
.: ရည်ရွယ်ချက် :.
သည် Group သည် ဓါတ်ပုံပညာကို စတင်လေ့လာသူများ အချင်းချင်း အတွေ့အကြုံ ၊ အကြံဉာဏ်များ နှီးနှောဖလှယ်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက် Group မှ ဓါတ်ပုံများအား အမှတ်တရဖြစ်နေစေရန်နှင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း တစ်နေရာတည်းတွင် လွယ်ကူစွာ ပြန်လည်ရှာဖွေ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဤစာမျက်နှာအားဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
.: သတ်မှတ်ချက် :.
- Camera ၊ Phone တို့ဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရိုက်ကူးသော ပုံများသာတင်ရန်
- ဓါတ်ပုံများအား ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သော အမည်တစ်ခုခု ပေးပေးပါရန်
- ဓါတ်ပုံများအား Camera Setting ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိခြင်း ၊ Crop ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ရေစာ(Water Mark) ရေးထိုးခြင်းများမှအပ ၊ အလင်းအမှောင် ၊ ကာလာ ပြင်ခြင်းများ ၊ ထပ်ဖြည့် ၊ ဖြတ်ထုတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါရန်
အကြံပြု မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ။ ။
20th September 2014 Solo Mdy‎
နန်းမတော် မယ်နု အုပ်ကျောင်း
အမှောင် ရ ခန်း အလင်း ရ ခန်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နန်းမတော် မယ်နု အုပ်ကျောင်း Cat Mountain Mountain
စိုးလင္း၏ အပိုင္း အစေလးမ်ား‎
Elijah Myoe Sunn
_/|\__ ေလးဆူဓါတ္ပံု ေရႊတိဂံု _/|\__
Soe Min Than
နည်းနည်းစောင်းသွားတယ် Maung Zin
How To Stimulate Your Photography by Learning From the Best - Henri Cartier-Bresson said that “Your first ten thousand photographs are your worst.” Every successful creative spends boundless time, thought, and conce...
- 100 – Study of Aperture Nos. ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ မွတ္စု အမွတ္( ၁၀၀) “ Lens Aperture ကိန္းစဥ္ တန္း ကို ေလ့ လာ ျခင္း “ ...
Sketch by light
Aperture21 | Lives Beyond The Light - Maymyo - Photographer, Photographic Services & Equipment - Notes | Facebook
မူပိုင်ခွင့် © .: zeroAltered Photo World :. ဒီဇိုင်း PS မပါ Photo ကမ္ဘာ